अब गाउँ ब्युँझियो – रोहित दहाल | Nepali Sahitya Ghar – नेपाली साहित्य घर
Home सिर्जना कथा / लघुकथा कथा डबली अब गाउँ ब्युँझियो – रोहित दहाल
अब गाउँ ब्युँझियो – रोहित दहाल
on: कार्तिक २८ , २०७४ मंगलवार- ०३:३७
एकदिनको कुरा हो, भूमिपति बूढा मुर्मुरिँदै पुरेत कहाँ आए । पुरेत बाजे साँझ बत्ती बाल्ने तयारी गर्दै थिए । “पुरेत बाजे !”आवाज सुनेर पुरेत बाजे हतार हतार बाहिर निस्किए ।
“खै ! तिम्री छोरी ?” भूमिपतिले ठाडो गरी सोधे ।
“भैंसीलाई दाना खुवाउँदै छे क्यार ! के बिराई कुन्नी ! भित्रै सवारी होस् न हजूर । ”
“पर्दैन, हतार छ मलाई । तिम्री छोरी उत्ताउली भइसकिछ । त्यै भन्न आ’को म ।”
पुरेत बाजे अक्क न बक्क परे । भूमिपतिले कुरा विस्तार गरे, “आज श्यामेको डँडाल्नुमा हँसिया रोपिछे तिम्री छोरीले । ज्यानमारा मुद्दा हाल्ने मन थियो मलाई, तिम्रो मुख हेरेर मात्रै…..। छोरीलाई तह लगाऊ झट्टै नत्र नराम्रो होला ।”
पुरेत बाजेले राम्ररी कुरा बुझिसकेकै थिएनन् , भूमिपति बूढा त्यहाँबाट फनक्क फर्केर हिँडिहाले । पुरेत बाजे अकमक्क पर्दै भित्र पसे । गोठको काम सकेर निर्मला पनि आई । बुवालाई देखेर दौंडदै छेऊमा आई अनि भनी “ बाबा ! गणेश दाइले कत्ति मीठो गीत लेख्नु भा’छ , सुन्ने ?”
ऊ गीत भट्याउन थाली –
गरीबको झुप्रो , डोको र नाम्लो लाउनलाई क्यै छैन !
साहुको भारी नबोकेसम्म चुल्हो नै बल्दैन !!
भूमिपतिको चोटिलो कुराले आहत भएका पुरेत बाजेले गीतप्रति खासै चासो राखेनन् । आफ्नी कान्छि छोरीलाई गाउँकै ठूलोठालु भूमिपतिले उत्ताउली र छाडा बताएपछि बाजे चिन्तित बनेका थिए । घरमा फेरि कान्छि छोरी निर्मलाबाहेक अरु कोही पनि त थिएनन् । जीवनसंगीनीले साथ छोडेपछि र पाँचवटी छोरीहरुलाई घरतिर बिदा दिएपछि बाजे झण्डै–झण्डै एक्लै भएका हुन् । निर्मला नहँुदी हो त उनी जीवनबाट न्यास्रिएका हने थिए । भर्खरै उन्नइस हिँडेकी निर्मला स्वभावले चन्चले अनि अलिकति विद्रोही खाले थिई । पुरेत बाजेसँग कहिलेकाहीँ ठाकठुक पनि पथ्र्यो उसको तर, क्षणभरमै बाजेलाई कुराले फकाइहाल्थी ऊ ।
निर्मला गीत भट्याउँदै थिई । पुरेत बाजेले बीचैमा सोधे, “छोरी ! आज तिमीले के बदमासी ग¥यौ ?”
“बदमासी ?” चोरी औंलोलाई कंचटमा राखेर बिर्सिएको कुरा सम्झे झैं गरी उसले भनी “ए ! अँ !! आज तल्लो फेदीमा एउटा सानो केटाले घाँस काट्दै रै’छ । दिनभरी काटेर जम्मा गरेको बिटो त्यो झ्याप्ले, के नाम पो हो त्यसको…….ए ! त्यो श्यामेले खोसेर पो लाँदो रै’छ । भूमिपतिको सालो भन्दैमा अत्तेचार गर्न त पाइन्न नि हगि बाबा ? हो भन्नु न !” बाजेले टाउको मात्र हल्लाए ।
“मैले पनि श्यामेलाई बेस्कन झपारें । त्यो बजिया त तरुनी भनेर सुम्सुम्याउँन पो आउँदो रै’छ । मेरो पाले त्यै हँसियाले झट्टारो हानेको त डँडाल्नु रोपिएछ अनि त थुचुक्कै बस्यो मोरो ! ”
बाजेले एकछिन गम खाए ।
“ठूला मान्छेसँग जोरी खोज्न हुन्न छोरी । उनीहरुले चाहे भने हाम्रो जात काढ्न पनि सक्छन् । न्वारन, सराद्धे हुँदा मलाई बहिस्कार पनि गर्न सक्छन् ।” बाजेले गम्भीरतापूर्वक कुरा राखे ।
“उनीहरुको कानून मानेर अब कतिन्जेल बस्ने ? अब त तोड्नुपर्छ यस्ता कुराहरु ।” छोरीको कुरा मन नपरे पनि उनी चुपै रहे । एकछिन बाजेको आँखामा हेरेपछि फेरि बोली ऊ “छाड्नोस् बाबा, ती कुरा ! बरु यो गीत सुन्नोस् न !” ऊ फेरि भट्याउँन थाली –
डाडु र पुन्यु चलाउने हातले खुकुरी बोकन !
अन्याय मास्न कलिला मुठ्ठी बेसरी कसन !!
पुरेत बाजेले एकछिन त सुने अनि भोक लागेको बाहाना झिकेर भान्सातिर लागे । खाना खाँदै गर्दा गाउँका घनेन्द्र भिनाजु आइपुगे । उनले एउटा अप्रिय समाचार लिएर आएको थिए ।
“भिनाजु बस्नोस् न ।” निर्मलाले इसारा गर्दै पिर्कामा बस्न भनी ।
“हैन मत तिमीलाई एकछिन लिन भनेर आएको । महिला प्रतिनिधि कोही भएनन् त्यसैले …”
“एक्कासी के भो’ त्यस्तो ?” निर्मलाले आश्चर्य मान्दै सोधी ।
“विश्वकर्मा दाइ मरेछन् ।”
“ आम्मै !” खाँदाखाँदै उठी ऊ ।
“अब ती अत्याचारीहरु विरुद्ध भोलि नै केही नगरी हुन्न ।” क्रुद्ध भएर जुठै हातलाई मुठ्ठी पारी उसले ।
“त्यै भएर त लिनआएको ।” घनेन्द्र भिनाजुले भने । पुरेत बाजेले घनेन्द्रतिर आँखा हेर्दै नबुझेको चित्त पोखे “ रात परिसक्यो, छोरी मान्छेले रातविरात हिँड्नु हुन्न । के भन्लान् मान्छेहरुले ?”
“म लरतरी केटी काँ छु र !” यति भनेर माथिपट्टि सिउरिएको खुकुरी दापसहित झिकेर पटुकीभित्र घुसारी निर्मलाले । पुरेत बाजेले केही पनि बोलेनन् । ऊ पनि “चाँडै आउँछु” भन्दै मजेत्रो ओढेर निस्की ।
त्यहाँ पुग्दा थुप्रै मान्छेहरु भेला भइसकेका रहेछन् । विश्वकर्मा दाइको शव कपडाले ढाकेको थियो । टुहरे दाइ, रफ्फू कान्छा, तीलचामले पनि आएका थिए । गणेश दाइले निर्देशन गर्दै थिए सबैलाई । विश्वकर्मा दिदी भने सुँक्क–सुँक्क गरेर बसेकी थिइन् । बाहुन बस्तिनिरको कुवा छोएको आरोपमा बाहुनहरुले उनलाई कुटेर सख्त घाइते पारेका थिए । त्यहि कुटाईका कारण विश्वकर्मा दाइको निधन भएको थियो ।
हुन त त्यहाँ प्रत्येक बर्ष सानातिना निहँुमा झड्प भइरहन्थ्यो तर, विगत धेरै वर्षपछि यो घट्ना घट्यो । बहुदल आएपछि भएको यो एउटा ठूलै घट्ना थियो । गाउँको इतिहास सुनाउँनेहरु भन्छन – धेरैबर्षअघि त्यो विश्वकर्माहरुकै गाउँ थियो रे ! पछि कुन्नी कुन राजाले त्यहाँ उपाद्येहरुको बस्ति बसालेको थियो । त्यसपछि त्यहाँका विश्वकर्माहरुले आफ्नो सँस्कृति मान्नुभन्दा तिनै बाहुनहरुको इसारामा सबै कुरा गर्नुपर्ने भयो । अहिले त त्यहाँ अरु जातिका मान्छेहरु पनि बसाइँ सरेर आइपुगेका थिए ।
विश्वकर्मा दाइलाई मार्नुमा राजनैतिक कारण पनि नमिसिएको हैन । गएको चुनावमा त्यहाँका कतिपय मान्छेहरु विभिन्न पार्टीका झण्डा बोकेर हिँडेका थिए । तर विश्वकर्मा दाइले चैं चुनावमा मतलब नै राखेनन् । उनले बनाएको दलीत मोर्चाको भोट तान्न भूमिपतिका मान्छेहरुले प्रयास पनि गरे तर, विश्वकर्मा दाइ एउटै कुरा गर्थे – “जातीय मुक्ति भोटबाट हैन संघर्षपछि….।” दलितहरुले भोट नहालेपछि उनीहरु विश्वकर्माप्रति क्रुद्ध भएका थिए ।
भेला भएकाहरुबीच केहीबेर छलफल चल्यो । छलफलले भोलिपल्ट मंगलबारे हाट लाग्ने दिन आमसभा गर्ने निर्णय ग¥यो । गणेश दाइले जुलुसमा लाग्ने नारा कोरे– “बाहुनवादी अहंकारवाद– मुर्दावाद !”
भोलिपल्ट हाटबजारमै आमसभा भयो । निर्मला उद्घोषक अरुहरु वक्ता । विश्वकर्मा दिदी पनि त्यहीं थिइन्– रातो पहिरनमा । उनको रातो पहिरनले पूरातन परिवेशका विरुद्ध क्रान्तिको शंखघोष गरेको प्रतित हुन्थ्यो । आमसभामा उभिएको पण्डित नरनाथ दगुर्दै भूमिपति कहाँ पुग्यो ।
“हजुर ! बर्वाद भयो । विनाशै हुने भो’ , कलियुगको शुरुवात भएजस्तो छ ।” उसले सुनायो ।
“के भो ?” भूमिपति बुढाले हातको छडिलाई भुइँमा जोडले थिचेर सोधे ।
“अहो ! दमाईं–कामीहरुले सभा गरे हाटमा, मान्छे त कत्ति कत्ति । बाहुन मास्ने कुरा गरे तिनेरले ।”
छेउछाउमा बसेका भूमिपतिका धुपौरेहरुले एक वित्ता लामो जिब्रो काढे । भूमिपतिलाई शिरदेखि पैतालासम्म रगत उम्लिएर आयो । निर्मला, घनेन्द्रहरु पनि त्यहाँ थिए भनेको सुन्दा ऊ झन रातोपिरो भयो ।
“कस्ता बेबकूफ ! आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हान्न तम्सेका ।” लामो सास फाले भूमिपतिले । चस्माको डाँडीलाई नाकको टुप्पोसम्म झारेर केहीबेर घोरिए अनि दुईजनालाई दायाँ–बायाँ लाएर हिंडे पुरेत कहाँ । घरमा समस्या परेको भए धेरथोर मद्दत गर्ने आश्वासन दिंदै भूमिपतिले पुरेत बाजेसँग खाँटी कुरा गर्न तम्सिए ।
“निर्मला नानी खै नि !” भूमिपतिले घ्यू वाक्य बोले ।
“भित्रै होली ।” भन्दै पुरेत बाजेले त्यहींबाटै बोलाए ।
ऊ पनि निस्की । भूमिपति बाहिरको खटियामा पलेंटी मारेर बसेका थिए । पुरेत बाजे छेऊमा थिए अनि अरु दुईजना चैं भुईंमा टुक्रुक्क बसेका थिए ।
“आऊ नानी यता बस, एकछिन बात मारौं ।” हातले खाटमा धाप लाउँदै भूमिपतिले निर्मलालाई बस्न भने । त्यसपछि अनेकौं तानाबाना बन्दै भने– “इस्कुल सकेको मान्छेले शहरतिर महाविद्यालय पो धाउँनुपर्छ । गाउँका मुर्खहरुसँग संगत गर्नु हुन्छ त पढ्या मान्छेले ?” निर्मलाले भूमिपतिको कुरा बुझी । केहीबेर भूमिपतिका कुरा सुन्न ऊ चूप लागी । भूमिपतिलाई आफ्नो प्रयासले गति लिन थालेको आभास भयो । उनले विस्तारै–विस्तारै आक्रोस ओकले – “यी तल्ला जातिका किराहरुलाई मत्यायो भने बाहुन काट्न बेर लाउन्नन् ।”
अब भने निर्मलाले नबोली भएन । “बाहुन काट्ने कुरा काँ गरेका छन ? बाहुन बराबरको अधिकार पो खोजेका हुन् ” प्वाक्क जवाफ फर्काइदिई उसले ।
“नानी ! तिमी बच्चै छ्यौ, त्यो गणेशेको उल्क्याईमा नलाग । यी सबै देशभाँडा हुन् । हाम्रो पवित्र मनुशास्त्र सिध्याउँने पापी हुन् ।”
दुबैबीच एकछिन बहस चल्यो । भूमिपतिका तर्कहरुको कुनै जोड चलेन । निकै बेर भएपछि भूमिपति खाटबाट जुरुक्क उठे । पुरेत बाजे सर्वस्व हुने भयो भन्ने सोच्दै छोरीलाई हप्काउँन खोज्दै थिए ।
“विनासकाले विपरीत बुद्धि ।” भूमिपतिले फलाके । “छोरी मान्छे बासेको राम्रो हुन्न,” पुरेततिर यसो हेरे उनले र फेरि बोेले “तिम्री छोरीको चाला निको छैन, गणेशसँग सल्केकी छे भन्ने हल्ला छ । बाहुनकी छोरी त्यो दमाईसँग पोइल हिँडी भने तिम्रो आतेपाते सबै गुन्द्रुकको झोलमा डुब्ला ।” यति भनेर भूमिपतिले कर्के आँखाले झट्ट निर्मलालाई हेरे अनि भित्ता लडाउँला झैं गरी नाकको पोराबाट ‘फूँ’ गर्दै सास छोडेर हिंडे ।
निर्मलालाई खपिनसक्नुको रिस उठेको थियो । हत्त न पत्त उसले आँगन छेऊबाट ढुंगा उठाएर पछाडिबाटै हिर्काउँन तम्सी । पुरेत बाजेले हात समाएर मात्रै, नत्र भूमिपतिको टाउकोमा टुटुल्को चैं उठ्नेथ्यो ।
संघर्षका यस्तै यस्तै घटनाहरुले दिन बित्दै गए । भूमिपति र उनका मान्छेहरु षडयन्त्रका नयाँ नयाँ सोचहरु खोजिरहन्थे । एकातिर भूमिपतिको घरबारी उठीबास लाउँने सुदखोर प्रबृत्ति अनि अर्कोतिर दलितहरुलाई पैतालामूनी राख्ने उनको प्रयासले गर्दा गाउँका थुप्रै मान्छेहरु ठोेसिएको अगुल्टो झैं भर्भराउँदै थिए । गाउँका मान्छेहरुलाई भड्काउँने काम गणेशले नै गर्दैछ भन्ने भूमिपतिको अनुमान रह्यो । पहिले पहिले विश्वकर्मा दाइ नै यी सबै घट्नाका नायक भन्ने सोचेका थिए उनले तर, हैन रहेछ । भूमिपतिले दाह्रा किटे –‘कट् कट् ’
“यो सबै काम गर्ने गणेश हो । निर्मला, घनेन्द्र……यी बाहुनहरुलाई पनि भड्काउँने ।” भूमिपतिले अब नयाँ योजना बनाउँन थाले ।
टुहुरे दाइको गाई गएको दिनदेखि थला परेको थियो । धामी, झयाँक्री, फुकफाक सबै व्यर्थ भए । गाई र्याल काढेर भुईंमा पछारिएको थियो । गणेश दाइले टुहुरेकै अनुरोधमा एक बोतल खरानी पानी खुवाइदिएका थिए । तर गाई एकैछिनमा म¥यो ।
भूमिपतिले मान्छेहरु भेला गराए । गाउँका ठूलो मुखिया, सानो मुखिया लगायत सबै भेला भए । शहरबाट पुलिसहरु पनि लिएर आएका थिए उनले । पुलिसलाई साथमा नलिइकन गणेशलाई छुन कुन मुर्खले आँट गथ्र्यो र !
गणेश दाइलाई पुलिसहरुले हतकडी लगाए । भेला भएका गाउँलेहरु आक्रोशित भए ।
“गणेशले त मैले भनेकोले मात्र उपचार गर्न खोज्याथे ।” टुहुरे दाइ बोले । उनको आवाज सुन्न कोही तयार भएन । उजुरी परेकोले पुलिसको अनुसन्धान पछि टुंगो लाग्छ भन्दै पुलिसहरुले गणेश दाइलाई तान्न थाले ।
“नचाहिंदो काम गर्नेको नतिजा यही हो ।” भूमिपतिको सालो श्यामेले ढाड खुम्च्याउँदै भन्यो । घनेन्द्र भिनाजुले कठालोमा समातेर हुत्याए उसलाई । ऊ गोबरको थासमा लड्यो । एकछिन घम्साघम्सी भयो त्यहाँ । पुलिसहरुले छुट्याए दुबैलाई ।
“पुलिसकै अघि त यस्तो गर्नेले के गर्दा हुन् अरु बेला ? ” हात मुसार्दै भूमिपतिले असई सामू प्रश्नवाचक बिन्ति हाले ।
“गाईमारा यै हो ।” श्यामे फेरि अघि स¥यो ।
“हैन, कुरा त्यस्तो हैन ।” टुहुरे दाइ भन्दै थिए ।
“किन हैन ? यिनेरुका नेताले पोहोर गाई मार्न पाउँनुपर्छ भनेर भाषण ग¥या हैन ?” भूमिपतिले तर्क राखे ।
“हेर्नोस्, भूमिपति बाजे ! कुरो नबंग्याउनुहोस ।” घनेन्द्र भिनाजु भन्दै थिए । तर भूमिपतिले कुरा काटे “हिन्दूको बाहुल्य भएको देशमा हिन्दूकै नियम चल्छ । प्रजातन्त्र भन्दैमा यी गुहे किराहरुले आफ्ना आफ्नै चलन चलाउँन काँ पाइन्छ ? गाई मारेर हाम्रो शेखी झार्न खोज्या हुन यिनेरुले । काटेर मारे पनि विष खुवाए पनि गाई त मारे आखिरमा । यिनेरुलाई छाड्न हुन्न ।”
पुलिसले गण्ेशलाई लिएर गए । भूमिपति, श्यामे र अरुहरु पनि पछि पछि लागे । निर्मला भैंसीलाई पानी खुवाउँन भुल्के खोला गएको थिई । घट्ना थाहा पाएपछि दगुर्दै आई ऊ । गणेश दाइलाई पर पु¥याईसकेका थिए । उसले त्यहींबाट त्यो दृश्य हेरी । घुघुत्ति डाँडाले न छेलुन्जेल हेरिरही । उसका आँखाबाट आँशु गुडे ।
“अब संघर्ष रोकिन्छ कि !” उसलाई कताकता चिसो लाग्यो । पछाडि फर्केर हेरी उसले । मान्छेहरुको जमात ठूलोठूलो आवाज निकाल्दै गाउँ घुम्दै थियो ।
“कि मृत्यु, कि मुक्ति ।” दलित समूदायले नाराहरु लगाउँदै थिए । घरभित्र चुकुल लगाएर बसेका लोग्ने मान्छे, स्वास्नी मान्छे, केटाकेटी पनि ब्युँझदै ढोका उघारेर जुलुसमा मिसिए । निर्मला हर्षले गद्गद् भई । आँखाको आँशु पुछेर ऊ पनि दगुर्दै त्यतै लागी । गाउँ, पाखा, जंगल एउटै गीतमा सुसाइरहेका थिए –
“धर्मभेद जातिभेद अन्त गर्नैपर्छ !
अब यौटै मान्छे भन्ने जाति हुनुपर्छ !!”